Guriga - Word Foundation • Daabacayaasha Fikradaha iyo Danta
Daabacayaasha Fikradaha iyo DESTINY
Hadda waxaad diyaar u tahay in aad soo gudbiso macluumaadka muhiimka ah adiga oo ah bini-aadan-oo ku jira buugga Fikirka iyo Dareenka by Harold W. Percival, mid ka mid ah fikradaha ugu weyn ee qarnigii XNUM. Marka la daabaco in ka badan toddobaatan sannadood, Fikirka iyo Dareenka waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu caansan iyo qeexan ee loo fidiyo aadanaha.
Ujeedada ugu weyn ee website-kan waa inuu sameeyo Fikirka iyo Dareenka, iyo sidoo kale buugaagta kale ee Mr. Percival, oo ay heli karaan dadka adduunka. Dhamaan buugahan waxaa laga yaabaa in hadda la aqriyo internetka waxaana laga heli karaa Maktabadda. Haddii tani ay tahay baaritaanka ugu horreeya ee Fikirka iyo Dareenka, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku bilowdo Qoraaga Hordhaca iyo Hordhaca.
Qoraaga Muhiimka ah
Astaamaha joomatari ee loo adeegsaday boggan waxay soo gudbinayaan mabaadi'da metaphysical ee lagu muujiyey laguna sharraxay Fikirka iyo Dareenka. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan calaamadahaas ayaa laga heli karaa halkan.
In kasta oo taariikhdu na tustay in bini-aadamku inta badan u janjeero inuu maamuuso oo u sharfo qof haybadkiisu yahay HW Percival, isagu laftiisu wuu ku adkaystay inuusan doonaynin in loo tixgeliyo macallin. Wuxuu weydiisanayaa in bayaanada ku jira Fikirka iyo Dareenka in lagu xukumo runta ku jirta qof kasta; Sidaa daraadeed, wuxuu akhristaha u celiyaa akhristaha:
Uma jeedo inaan wax ku wacdiyo; Uma maleynayo nafsad ahaantiis ama macallin. Ma ahayn in aan masuul ka ahay buugga, waxaan jeclaan lahaa in shakhsiyadeyda aan loo magacaabin sida qoraaga. Weynaanta maadooyinka aan ku soo bandhigo macluumaadka, niyad-jebinta iyo iga xakameynaya isku-kalsoonaanta oo ka reeban qaylo-dhaanta. Waxaan ku dhaleeceynayaa hadalo qariib ah oo bilaw u ah miyir-beelka iyo kuwa aan dhimanayn ee ku jira jir kasta oo bini'aadam ah; iyo inaan qaato si aan u ogaado in qofku uu go'aan ka gaarayo waxa uu rabo ama uusan sameyn doonin macluumaadka la soo bandhigay.
Ku saabsan HW Percival
Aniga shakhsi ahaan waan tixgelinayaa Fikirka iyo Dareenka inay noqdaan buugga ugu muhiimsan uguna qiimaha badan ee lagu soo daabacay luqad kasta.
Haddii aan jaahwareer ku galo, oo loo ogolaaday inay qaataan hal buug, tani waxay noqon doontaa buugga.
Fikirka iyo Dareenka waa mid ka mid ah buugaagta agoonta ah oo noqon doona mid run ah oo qiimo leh oo bini'aadanku ka buuxdo toban kun oo sano laga bilaabo hadda sida ay tahay maanta. Khayraadka maanka iyo ruuxaba waa kuwo aan la aqbalin.
Sida Shakespeare waa qayb ka mid ah da 'kasta, sidaas waa Fikirka iyo Dareenka buugta aadanaha.
Buuggu maaha mid ka mid ah sanadka, ama qarnigii, laakiin waa xilligii. Waxay sheegaysaa saldhig u ah akhlaaqda oo waxay xallisaa dhibaatooyinka nafsaaniga ah ee dadka ku wareeray da'dooda.
Fikirka iyo Dareenka wuxuu siinayaa macluumaadka aan raadinayey muddo dheer. Waa naadir, niyadjab iyo dhiirigelin ku aaddan bani-aadmiga.
Akhriska Fikirka iyo Dareenka Anigu waxaan dareemayaa cabsi, naxdin, iyo xiiso xoog leh. Waa maxay buug! Waa maxay fikradaha cusub (aniga ii) waxaa ku jira!
Marnaba horaan, aniguna waxaan ahay raadiye xaqiiqo raadinaya noloshayda oo dhan, miyaan ku helnay xikmad badan iyo is-muujin markaan si joogta ah u ogaanayo Fikirka iyo Dareenka.
Ilaa aan ka helay buugan marnaba uma muuqan mid ka mid ah adduunkan argagaxa leh, ka dibna waxay igu toosisay si degdeg ah.
Mar kasta oo aan dareemo in aan naftayda u jahwareerayo waxaan ku furay buugga si aan kala sooc lahayn oo aan u arko wax aan akhriyo kaas oo i siiya wiishka iyo xoogga aan u baahanahay waqtigaas. Si daacad ah ayaanu u abuurnaa jiilkayaga iyada oo la fekerayo. Sidee noloshu u kala duwanaan laheyd haddii aan nala baranno in laga bilaabo gogosha.
Cadaadiska Fikirka iyo Dareenka waa inuu joojiyaa raadiyaha kasta oo halista ah ee raadinaya macluumaad qoran oo sax ah oo ku saabsan nolosha. Qoraagu wuxuu muujiyey inuu ogyahay waxa uu ka hadlayo. Ma jiro luuqad diineed oo waali ah iyo mala awaal. Si aan caadi aheyn noocan oo kale ah, Percival wuxuu qoray wixii uu yaqaan, wuuna ogyahay wax badan - hubaal in ka badan qoraaga kale ee la yaqaan. Haddii aad la yaabban tahay cidda aad tahay, maxaad halkan u joogtaa, dabeecadda koonka ama macnaha nolosha markaa Percival kuuma deynayo ... Isu diyaari!
Tani waa mid ka mid ah buugaagta ugu muhiimsan ee lagu qoray taariikhda la og yahay iyo tan aan la garanayn ee meerahan. Fikradaha iyo aqoontu waxay cadeeyeen inay racfaan qaataan, waxayna leeyihiin "giraanta" runta. HW Percival waa qof aan faa'iido u lahayn aqoonta aadanaha, sida hadiyaddiisa suugaaneed uu soo bandhigi doono, marka si aan caddaalad loo baarin. Anigu waxaan la yaabay maqnaanshaha shaqadiisii ​​hore ee liisaska "talabixinta" ee badan ee dhammaadka buugaag badan oo muhiim ah oo aan akhriyey. Waa runtii mid ka mid ah qarsoodiga ugu wanaagsan ee lagu hayo caalamka ragga. Dhuxul farxad leh iyo dareenka mahadnaqa waa la soo baxayaa, markasta oo aan u maleynayo in barakadaasi tahay, laga ogaado adduunka oo dhan sida Harold Waldwin Percival.
Ka dib markii 30 sanado badan oo ka mid ah buugag badan oo ku saabsan cilmi nafsiga, falsafada, sayniska, metaphysics, dabeecada iyo mawduucyada qaraabada, kitaabkan cajiibka ah waa jawaab dhamaystiran oo dhan oo aan raadsaday sanado badan. Marka aan soo saaro waxa ku jira waxa ka dhalan kara natiijada ugu weyn ee maskaxda, dareenka iyo jirka oo leh dhiiri galin weyn oo ereyada aan sheegi karin. Waxaan tixgelinayaa buuggan dareenka ugu badan iyo muujinta in aan waligey ku farxay akhriska.
Buuggii ugu fiicnaa ee aan abid akhriyo; aad u qoto dheer waxayna sharraxaysaa wax kasta oo ku saabsan jiritaanka qofka. Buddha wuxuu yiri beri hore fikirku waa hooyada ficil kasta. Ma jiraan wax ka fiican buuggan oo si faahfaahsan u sharraxa. Mahadsanid.